Nhau - Automechanika Shanghai
Automechanika Shanghai inowanzozivikanwa seShanghai nyika dzese auto zvikamu zvekuratidzira kuchengetedza kuongororwa kweyekushandisa michina sevhisi yekuratidzira, ndiyo mota yakakura kwazvo mushure mekutengesa sevhisi yekuratidzira muAsia, iri zvakare yechipiri mukurusa Automechanika kuratidzira mushure meratenzi muFrankfurt, Germany. Inoshanda pamwe chete nemimwe mienzaniso gumi nemashanu Automechanika kutenderera pasirese kugovana zviwanikwa zvepasi rese zvemutengi uye nekupa vimbiso yemhando yepamusoro.
Yemotokari indasitiri mutambo mutambo kubva 2004, mushure memakore gumi nematatu ekukurumidza kukura, Atomechanika Shanghai yakashanduka kuita yepasi rose mota indasitiri inofarira chikuva chekuchinjana ruzivo, kusimudzira pasocial, dzidzo, kushambadzira uye kusangana kwekutengeserana.
16th Automechanika Shanghai yakaitwa kubva Zvita 3-6, 2019 pagungano renyika reHONGQIAO uye nzvimbo yekuratidzira muShanghai Nzvimbo yekuratidzira inotarisirwa kusvika pamusoro pe36,000 mativi emamita mu2019, ichikwezva vanopfuura varatidziri mazana matanhatu nemakumi mashanu nevatengi vemhando yepamusoro uye vashanyi vane hunyanzvi. kubva kumativi ese epasi.
Izvo zvigadzirwa zvinoratidzwa mune ino kuratidzwa ndizvo zvikuru zvigadzirwa zvekambani, mhando yepamusoro, dzakasiyana siyana dzekushandisa, inokodzera kwenguva refu-lubrication.We takaita yekureba-kusimudzira kusimudzira muiriiri indasitiri mumakore achangopfuura, tichitora nzira yekuvandudza yepamusoro -end zvigadzirwa, uye kuvandudzwa kwechiratidzo kwakadzikama, Petroking yatora chinzvimbo chakakosha mumunda wegrisi nekugona musika kugona kugona Kunyangwe zvakadaro, tinoziva kuti kuchine nzira refu yekufamba. Tichaenderera mberi nekuvandudza manejimendi sisitimu, kumhanyisa maitiro ekuvaka PETROKING brand, zvine musoro kutarisana nemusika kudiwa, uye kugadzira zvimwe zvemhando yepamusoro zvigadzirwa zvekushandira ruzhinji rwevashandisi.
Pakupera kwekuratidzwa, maneja wedu anotungamira Simon anotambira bvunzurudzo nevezvenhau vepamusha, seimwe yemafuta makuru nemafuta ekugadzira muChina.
Isu PETROKING PETROLEUM HEBEI CO., LTD takapinda musangano mukuru uyu sezvakarongwa, uye tinogamuchira vatengi vatsva nevakuru kuti vashanyire dumba uye kutaurirana bhizinesi.
Dumba redu Kwete. Is 5.2N27, ndatenda nekushanya kwako